Maalinta Oohinta Haweenka Soomaalida Ogadeeniya – Rasaasa News
Maalinta Oohinta Haweenka Soomaalida Ogadeeniya
Jijiga, March 8, 2014 – Maanta waa March 8, 2014, waana maalin wayn oo loo aqoonsaday xuquuqda haweenka aduunka. Waxaana maanta oo kale la sameeyaa dabaal dagyo lagu xusayo aqoonsiga xuquuqda Haweenka.
Dhinaca kale maanta, waxay xusuus madow u tahay Somalida Ogadeeniya, taas oo ku beegan maalintii madoobayd ee ay ciidamada Ruushka, Kuubaanka iyo Atoobiya ay dib u qabsadeen Ogadeeniya March 8, 1978, ka dib sideed bilood oo ay neecaw xornimo haysteen shacabka Somalida Ogadeeniya.
Meela badan oo aduunka ah waxaa maanta ka dhacay dabaal dagyo lagu waynaynayo guusha ay gaadheen haween badan oo ku nool dalalka aduunka qaarkood. Meelo badan oo aduunka ahna xuquuq hadalkee ha joogtee waxayna haysan Haweenku wax ay cunaan.
Somalida Ogadeeniya oo ka mid ah meelaha aduunka ugu dhibaatada iyo cadaadiska badan, waxay dhibaatada ugu badan ku dhacdaa haweenka Somalida Ogadeeniya. Waxaana maalin walba ku dhaca dambiyo lid ku aha xuquuqda haweenka iyo mida aadmiga, kuwaas oo isugu jira dhac, xadhig, kufsi iyo dil.
Dhibaatada guud ee gumaysigu ku hayo Somalida Ogadeeniya, waxaa si gaar ah loogula beegsadaa haweenka oo ah, kuwa ugu nugul bulshada. Dambiyada loo gaysto haweenka Ogadeeniya kuma koobna oo kaliya meelaha ka durugsan xarunta Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI] ee Jijiga. Dhawaan waxaa magaalada Jijiga dhaxdeeda sideed nin oo ka tirsan maleeshiyada Liyuu Boliisku si wada jir ugu fuuleen gabadh 15 jir ah oo aan Aabe iyo Hooya lahayn.
Dhibaatada haweenka Somalida Ogadeeniya waa mid xad dhaaf ah, mana jirto cid diiwaan galisa dambiyada laga galo haweenka. Marka laga tago dhibaatada ay u gaystaan ciidamada Atoobiya, haweenku kama helaan bulshada xuquuqda aas aasiga, xitaa inta ay helaan kuwa dunida saddexaad sida; sida waxbarashada, shaqada iyo guurka.